Diaben’ny Fandriampahalemana: ‘Atsaharo Ny Herisetra any Myanmar Avaratra’ · Global Voices teny Malagasy
Diaben'ny Fandriampahalemana: ‘Atsaharo Ny Herisetra any Myanmar Avaratra’	Voadika ny 28 Janoary 2013 8:24 GMT
Zarao: Tamin'ny 21 Janoary lasa teo dia nisy vondrona mpanao diaben'ny fandriampahalemana 50 nahitana moanina nanomboka ny lava alina sy atoandro mahatratra 1300 km mankany amin'ny fanjakana Kachin any amin'ny faritra avaratr'i Myanmar niainga avy tao an-drenivohitra taloha, Yangon. Ny tanjona voalohan'ny fanentanana dia ny hanairana sy ny hangatahana ny hampitsaharana ny ady misy amin'izao fotoana izao eo amin'ny tafi-panjakana sy ny Tafiky ny Fahaleovantena Kachin (KIA). Manodidina ny 25 amin'ireo mpanao lava alina sy atoandro no manantena ny hahatratra ny toerana itodiana, dia ny tanànan'i Laiza, izay ahitana ny foiben-toeran'ny KIA, ao anatin'ny roa volana.
Mya Thien nanoratra tao amin'ny bilaogy Luthuorthan [my] fa
… very zavatra maro tokoa ny firenena sy ny vahoaka noho ny ady nanomboka nihoatra ny 60 taona lasa izay. Niteraka fijaliana maro ny ady; marika mamparikivy ho an'ny firaisamonim-pirenena ny fisian'ny zaza, ny zokiolona ary ny olona tsy manan-tsiny anisan'ny lasibatra ary fihemoran'ny firenentsika ao amin'ny tetezamita demaokratika.
Mpanao Diaben'ny Fandriampahalemana ao Yangon. Saripika avy amin'ny Facebook-n'ny Freedom News Group (Burma)
Yan Naing Tun, iray amin'ny mpikarakaran'ny vondrona no niteny[my] fa
Azontsika atao ny mandeha fiara na bisikileta; fa raha ny hisian'ny fandriampahalemana no tadiavitsika dia porofointsika amin'ny faharetana ho amin'izany ny toy izao
Na dia niteny aza ny governemanta fa hampitsahatra tsy misy fifanarahana ny ady tamin'ny herinandro, nilaza ny Kachins fa mbola nitohy ny ady. Nanoratra teo amin'ny facebook-ny i Khon Ja, avy amin'ny foko Kachin fa
Mitohy ny ady ao Hka Ya, anelanelan'i Laja Yang sy Laiza.
Voromby 2 nidina tao Lupi, akaikin'ny Pang Wa, manakaiky ny Tobin-tafika manana ny Mari-tSisintany Marika 5 sy ny Mari-tSisintany 6, nametraka Vondro-tafika sy fitaovam-piadiana.
Mitotaly eo amin'ny zana-bohitra 12 ahitana mponina 1339 no mihitsoka ao amin'ny lemak'i Gaw Gwi, andrefan'i Banmaw (Andrefan'ny moron-dreniranon'i Irrawaddy), sy avaratr'i Shwegu
Naneho hevitra tamin'ny sata ihany koa i Padang Hoi.
Nilaza ny tsy isian'ny fanafihana tamin'ny 18 janoary 2013 ny filoha thein sein sy ye htut, koa nahoana no mitohy ny fanafihan'ny tafik'i burma ao hkayar sy ny fampiasana angidim-by 7 farafahakeliny tao pangwa androany.. .inona ny dikan'izany?…
Zaza Mpialokaloka. Sary avy amin'ny Ligy Nasionalin'ny Mpialokaloka Birmana rehetra
Nahatonga fifindra-toeran'ny sivily mihoatra ny 90.000 ny herisetra misy indray eo amin'ny tafi-panjakana sy ny vondrona mpioko tamin'ny 2011. Nitatitra ny Ligy Nasionalin'ny Mpialokaloka Birmana rehetra [my] fa tsy afa-namonjy fampianarana ny zanaky ny mpialokaloka Kachin ary maty taom-pianarana iray noho ny ady.
Voatatitra fa nobahanan'ny manampahefana tao an-toerana sy ny polisy noho ny tsy fakana fahazoan-dalana ofisialy sy noho ny fanitsakitsahan-dalàna ireo mpanao diaben'ny fandriampahalemana. Namaly ny manampahefana toy izao i Aung Min, iray amin'ireo mpanao diabe
Tsy milahatra mampiseho hery izahay. Tonga eto ho amin'ny fandriampahaleman'ny vahoakan'i Myanmar izahay sy hampitsahatra ny ady ato amin'ny firenena… Izany no nahatonga anay tsy nangataka fahazoan-dalana ofisialy; saingy nampafantatra sy nitady fanampiana tamin'ny fikambanana sy ny filoha izahay.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraThant Sin
Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 6 ora izayShinaSiansa-Famisavisana Shinoa Nandrombaka ny Loka Hugo Tantara Foronona Tsara Indrindra
7 ora izayMaleziaNahazo Olona 100.000 Ny Fihaonambe Bersih Maharitra 34 Ora Tao Malayzia Izay Manohitra Ny Kolikolin'ny Governemanta
17 ora izayMyanmar (Birmania)Ndeha Hijery Ireo Vahoaka Kachin Nafindra Toerana Any Myanmar Avaratra
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, Español, Italiano, 日本語, English
Azia AtsinananaMyanmar (Birmania)
Ady & FifandiranaFanoheranaMediam-bahoakaVonjy VoinaZon'olombelona